အိပ်မက်ဆိပ်ကမ်း: 26 လက်ဆောင်-1 > Memorable Transition 26
26 လက်ဆောင်-1 > Memorable Transition 26
Memorable Transition 26
Now at the age of twenty-six,
Life has truly just start with risk.
ကျွန်တော့်ကို ပထမဦးဆုံး Birthday wish လုပ်ပေးတဲ့ Ko Hmat ပေးတဲ့ လက်ဆောင်ကဗျာလေး...။
Thanks bro for your kindness. :)
မနှစ်တုန်းကလည်း "25 ဂျွန်မိုးအိမ် 25" ဆိုပြီး လက်ဆောင်ပေးတဲ့ အစ်ကိုကြီးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်း)။ မနေ့ညတုန်းက တင်မလို့ပဲ..။ photo image လေး လုပ်မလို့...။ သို့ပေမယ့် ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်း မသိတော့လို့ စာပဲ တင်လိုက်ပါတယ်...း)